Sarudzo yemifananidzo kupenda zuva rako - Kuzvibatsira Rubatsiro | Kuzvibatsira Zviwanikwa
"Mufananidzo unokodzera mazwi churu" ndizvo zvinotaurwa neshoko rakakurumbira, chirevo chinopfupisa zvese izvo mufananidzo uri nyore unogona kutumira. Kune mumwe nemumwe munhu zvinogona kureva chimwe chinhu chakasiyana, nekuti manzwiro haana kufanana kune vanhu vese. Kunyangwe iwe pachako mufananidzo unogona kumiririra chimwe chinhu chakasiyana zvachose panguva dzakasiyana muhupenyu.
Mifananidzo yakakosha nekuti ndiyo nzira yechinyakare yekutaurirana zviripo. Kubudikidza nemadhirowa nezvimiririra kuburikidza nemifananidzo, vagari vekutanga vePasi vakakwanisa kutora nyaya dzaitora nzvimbo panguva iyoyo. Nekudaro, ivo vaigona kutaurirana nemamwe marudzi ari kure kuburikidza nemifananidzo yavo. Kutenda kwavari, nhasi tinogona kudzidza ruzivo rwakawanda nezvekuti hupenyu hwaive hwakaita sei munguva dzakare.
Mufananidzo une zvinhu zvisingaverengeke, kunyangwe zvakapusa zvinogona kunakidza zvisingaite. Izvo zvese zvinoenderana nemaziso anozvitarisa, asiwo pane izvo panguva iyoyo mucherechedzi anokodzera kuongorora. Izvo zviri pachena ndezvekuti hapana chisina kukosha mufananidzo. Mifananidzo yese ine chimwe chinhu cheiye akaigadzira, kungave kuburikidza nemufananidzo kana mufananidzo, imwe neimwe ine chikamu chemweya weiye akaigadzira uye izvo, pakupedzisira, ndizvo zvinopfuudzwa kumeso. Chemucherechedzi.
Muchikamu chino chinonzi Mifananidzo, iwe unogona kuwana mhando dzese dzekumiririra. Chero zvaunonzwa, iwe unowana chimwe chinhu chinobatsira kuita kuti zuva rako rive nani, zvishoma kwekanguva. Nekuti iwe zvakare uchawana mifananidzo inosetsa iyo yauchazonakidzwa nayo, mimwe ine hukama nehukama iyo ichakubatsira iwe kuyeuka kuti nei munhu iyeye achikosha kwazvo kwauri uye kunyangwe nei izvo zvinokuremedza zvakanyanya zvisina kukosha sekufunga kwako.
Nenzira imwechete iyo vanofarira hunyanzvi vanofarira kucherechedza pendi kwemaawa, kuongorora sitiroko yega yega, rumwe ruvara, ruzivo rwese rwakaratidzwa mubasa, mumifananidzo iyo yatichakusarudzira unogona kuwana ruzivo rwekuti iwe chete ndiwe uchanzwisisa. Ndokunge, pamwe vamwe vanhu havawone zvakafanana newe, asi ndiko kunaka kwehunyanzvi, iyo yega yega inonakirwa nekuidudzira neimwe nzira. Uye mifananidzo inogona kutariswa hunyanzvi nekuti ivo pasina mubvunzo vane chikamu chemweya cheakazvigadzira.
Kana iwe uri kutsvaga kurudziro kana kukurudzira, asi usingakwanise kuzviwana mune mamwe marudzi ezve zviwanikwa, senge mabhuku ekuzvibatsira kana hurukuro, mifananidzo ndeyako. Iwo anokurumidza, ari nyore kuona, uye anogona ive inonakidza seyakazara kwazvo mabhuku zviripo pamusika. Svetuka muchikamu chino chinonzi Mifananidzo, tandara necuriosities iyo inotenderera kupota nyika, kushamiswa nezvose izvo zvakasikwa zvinopa uye kunakidzwa nerunako rwezvinhu zvidiki.
Ndiani anoziva, pamwe mune imwe yemifananidzo iwe unogona kuwana kurudziro iwe unofanirwa kuchinja kosi. Kana kuti pamwe iwe unofunga kutora iyo nzira iyo inokutyisa zvakanyanya, kana iwe unoshamisika iwe pachako kutumira meseji kune iye munhu wausingasarudze kutaura naye. Zvese izvi zvinogona kukonzerwa nemufananidzo, nekuti kune vanhu vazhinji, izvo zvinopinda kuburikidza nemaziso zvinodzika zvakanyanya kupfuura iwo mazwi ayo dzimwe nguva anotorwa nemhepo.
Nakidzwa nesarudzo yemifananidzo yaunowana mune zvekuzvibatsira zviwanikwa, isu tine chokwadi chekuti uchavada uye ivo vachakubatsira iwe, zvirinani, kwekanguva. Tine chokwadi chekuti ukangotanga, haugone kumira uye unotarisira kune inotevera batch yemifananidzo inokurudzira, inonakidza, yemanzwiro uye inosimudzira iyo yatiri kutsvaga iwe.
Iyi ndiyo nzira inoshandiswa nemupurisa kudzivirira munhu kuti asvetuke kubva pazambuko
kubudikidza Daniel inoita 5 makore .
Mazuva maviri apfuura, mune yangu chinyorwa Iyo Bridge yeHupenyu, ndakataura nezve huwandu hwakawanda hwevanhu vari ...
9 vana uye vechidiki vanodada vanoratidza mavanga avo
Udiki ndeimwe yenguva dzinoshamisa kwazvo muhupenyu, asi inogona zvakare kutyisa zvikuru: zvakashata zviitiko ...
Iyi Mifananidzo 40 Inonyaradza Ichakuratidza Chiri Rudo Rwechokwadi
kubudikidza Daniel inoita 6 makore .
Chii chiri rudo rwechokwadi kwauri? Unogona kuzvitsanangura mumufananidzo? Chii chinouya mupfungwa? Ari…
16 mifananidzo yakandikurudzira pane ino Chikunguru 13
Ini ndinokukoka iwe kuti unakidzwe nemifananidzo iyi 16 yakandikurudzira pane uno Chikunguru 13. Ndinovimba vanokushandira ...
Yakabatwa pakati pekupokana kwevanhu. Mifananidzo inosetsa kwazvo
kubudikidza Daniel inoita 7 makore .
Paunenge uine chipfuwo, chinova chikamu chemhuri yako. Uye kana mhuka dzinovaraidza dzikava chikamu che ...
Iwe haumbofi wakakanganwa aya gumi "zvisingawanzo" mafoto kubva kare
Paunoona aya "zvisingawanzo" mapikicha enhoroondo uchaona kuti iwe unoziva zvishoma pane zvawaifunga, kunyangwe ...
17 nguva dzakanaka dzakakomberedzwa nemhirizhonga. 11 yakanaka
Kune kukakavara kuzhinji pasirese uye mapurogiramu enhau ari mukutarisira kuvaratidza. Naizvozvo, aya mafoto gumi nemanomwe ari akawanda ...
Izvi ndezvechokwadi ... chimwe chezvinhu zvakanakisa zvandisati ndamboona.
Muimbi weBritish Sue Austin anga ari muwiricheya kubva 1996 nekuda kwechirwere chehuropi….
13 dzakatemwa mhuka dzinofamba nema prostheses
Chokwadi kune mhuka dzakawanda dzinopfeka ma prostheses. Chete gumi nembiri dzinoonekwa muchinyorwa chino. Kana iwe uchiziva zveimwe nyaya, iwe unogona kundiudza ...
Mifananidzo gumi inonakidza yeembwa dzakanunurwa
Kwegore rapfuura, mutori wemifananidzo Theron Humphrey anga achifamba neUnited States achitora nekamera yake ...
Izvi ndozvinoitika kana baba vako vari Photoshop muimbi
Emil Nystrom mutambi weSweden uye baba vemwana akanaka. Kwete izvozvo chete, anotonga ...